कसरी कानूनी रूपमा नि: शुल्क एडोब प्रीमियर प्रो प्राप्त गर्न
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Premiere Pro को लागी नि: शुल्क कसरी प्राप्त गर्ने
Adobe Premiere Pro को लागी नि: शुल्क कसरी प्राप्त गर्ने
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-09-01, Nepali Blog
मिल्दो: विन्डोज, म्याक ओएस
अझै पनी थाहा छैन कसरी एडोब प्रीमियर प्रो को लागी एक पाइरेटेड संस्करण डाउनलोड नगरी मुक्त गर्न को लागी? एक $ २१ प्रति महिना सदस्यता बिना भिडियो सम्पादन को लागी यो उत्तम कार्यक्रम स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ? यस लेखमा, मँ तपाइँ कसरी एडोब प्रीमियर मुक्त को उपयोग गर्न को बारे मा बताउनेछु किन तपाइँ टोरेंट फाइलहरु डाउनलोड गर्न बन्द गर्नु पर्छ।
नि: शुल्क एडोब Premiere Pro लाभ:
धेरै संगठनात्मक उपकरणहरु
असीमित बहु क्याम कोण
360 डिग्री भिडियो को लागी राम्रो मद्दत
प्रयोग गर्न को लागी सरल
यो प्रीमियर प्रो सीसी नि: शुल्क परीक्षण दुबै macOS र विन्डोज मा भिडियो सम्पादन गर्ने हो?
हो, यो छ।
प्रीमियर प्रो नि: शुल्क परीक्षण शर्तहरु हेर्नुहोस्
प्रीमियर प्रो सदस्यता लागत कति छ?
मूल्य $ 20.99/महिना हो। दोस्रो सदस्यता विकल्प एडोब क्लाउड सबै एप्स हो, जुन $ 52.99/महिना खर्च हुन्छ। यो सेट एडोब प्रीमियर प्रो सीसी शामिल छ 2021 , प्रभाव पछि, साथै २०+ रचनात्मक डेस्कटप र मोबाइल अनुप्रयोगहरु को एक संग्रह को रूप मा।
कसरी एक सशुल्क सदस्यता को लागी प्रीमियर प्रो मुक्त संस्करण रूपान्तरण गर्न को लागी?
सामान्य को रूप मा, प्रयोगकर्ताहरु लाई एक अधिसूचना प्राप्त हुन्छ कि यो परीक्षण को अवधि समाप्त भए पछि कार्यक्रम को एक पूर्ण संस्करण किन्न को लागी आवश्यक छ। जे होस्, तपाइँ आधिकारिक Adobe वेबसाइट मा एक सशुल्क सदस्यता को आदेश दिन सक्नुहुन्छ।
के मँ यस बर्ष प्रीमियर प्रो नि: शुल्क परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्छु यदि मैले पहिले नै यो कार्यक्रम सित्तैमा गत बर्ष प्रयोग गरीसकेको छु?
हो। प्रयोगकर्ताहरु एक7दिन परीक्षण अवधि प्राप्त।
मँ प्रीमियर प्रो पाठ कहाँ पाउन सक्छु?
YouTube मा भिडियो हेर्नुहोस्। यदि तपाइँ प्रीमियर मुक्त संस्करण को उपयोग मा विशेष साहित्य पढ्न चाहानुहुन्छ, आधिकारिक एडोब प्रयोगकर्ता गाइड मा जानुहोस्।
नि: शुल्क पाठ हेर्नुहोस्
Adobe Premiere Pro को उपयोग गर्न को लागी अर्को तरीका
एडोब कम्पनी लामो समय देखि आफ्नो रचनात्मक कार्यक्रमहरु को सरलीकृत संस्करणहरु को एक लाइन को विकास गरी रहेको छ जसलाई उनीहरु तत्वहरु भन्छन्। उनीहरुसँग मात्र सबैभन्दा धेरै बारम्बार प्रयोग हुने कार्यहरु र एक सरल इन्टरफेस छ त्यसैले सबै शुरुआती वा जो केवल आफ्नो कार्यक्रम को फराकिलो प्रकार्यहरु को आवश्यकता छैन समस्या बिना आफ्नो उत्पादनहरु को उपयोग गर्न सक्छन्।
संगत: विन / म्याक
PREMIERE ELEMENTS FREE
Premiere Elements पेशेवरहरु:
स्पष्ट, सरल इन्टरफेस
भिडियो प्रभाव को धेरै
शक्तिशाली अडियो सम्पादन
स्थिरीकरण मा राम्रो नियन्त्रण
प्रीमियर तत्व सफ्टवेयर आधारभूत भिडियो सम्पादन र रंग ग्रेडिंग को लागी आवश्यक सबैभन्दा आवश्यक प्रीमियर प्रो तत्वहरु छन्। यो पूर्णतया शौकीनहरु को लागी अनुकूलित छ र यसको सिस्टम आवश्यकताहरु को रूप मा प्रीमियर प्रो सीसी छैन। एडोब प्रीमियर तत्वहरु 2021 साथीहरु संग साझा गर्न को लागी घर चलचित्र बनाउन चाहने मान्छे को लागी एकदम सही छ, तर जो धेरै भिडियो सम्पादन अनुभव छैन।
पाइरेटेड Premiere Pro को उपयोग को असुरक्षा
ब्लगरहरुलाई विश्वास नगर्नुहोस् जो "बिल्कुल कानूनी" नि: शुल्क एडोब प्रीमियर प्रो संस्करण को बारे मा आफ्नो भिडियो मा कुरा गरीरहेका छन्, जुन अजीब साइटहरु मा कार्यक्रम डाउनलोड गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
के हुन्छ यदि म एक फटेको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छु?
समुद्री डाकू सफ्टवेयर डाउनलोड प्रतिलिपि अधिकार उल्ल for्घन को लागी दायित्व entails। दण्ड सामान्यतया $ 1,500 को बारेमा हो। यसको अतिरिक्त, आधिकारिक वितरक एक कम्प्यूटर संग समुद्री डाकू सफ्टवेयर स्थापित भएको थियो संग काम गर्न इन्कार गर्न सक्छ।
एडोब लाइसेन्स र सर्तहरु हेर्नुहोस्
मलाई के फटाएको सफ्टवेयर को उपयोग गर्न रोक्न सक्छ?
पहिलो कारण दुर्भावनापूर्ण कोड र भाइरस हो जुन बिना लाइसेन्स सफ्टवेयर वितरण गर्ने साइटहरु को माध्यम बाट प्रसारित हुन्छन्। अवैध सफ्टवेयर डाउनलोड, तपाइँ keyloggers, पासवर्ड चोरी कार्यक्रम, र एल्गोरिथ्म दोष संग तपाइँको पीसी को संक्रमण को जोखिम चलाउनुहोस्।
सफ्टवेयर किन्दा मैले के बाट बच्नु पर्छ?
अनलाइन नीलामी प्राय पहिले प्रयोग गरीएको र सक्रिय सफ्टवेयर पुन: बेच्नुहोस्। तपाइँले नयाँ साइटहरुमा ध्यान दिनु पर्छ कि सबै कुरा बेच्नुहोस्।
एक इजाजतपत्र प्राप्त सफ्टवेयर को लाभ के हो?
यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा केहि हुन्छ भने तपाइँ समस्या संग एक्लै छोड्नुहुन्न। एक इजाजतपत्र सफ्टवेयर लगातार कार्यक्रम अपडेट र असफलता बाट बच्न को लागी संभावना प्रदान गर्दछ।
प्रीमियर प्रो मुक्त अपडेट गर्नुहोस्
म कहाँ लाइसेन्स सफ्टवेयर किन्न सक्छु?
यो केवल आधिकारिक एडोब वेबसाइट वा एडोब साझेदारहरु मा एक सफ्टवेयर किन्न को लागी राम्रो छ।
5 Premiere Pro नि: शुल्क विकल्प
त्यहाँ एक गलत धारणा छ कि एक पेशेवर videographer हुन को लागी, तपाइँ तपाइँको सफ्टवेयर को लागी तिर्न आवश्यक छ। अन्यथा, तपाइँ विन्डोज चलचित्र निर्माता भन्दा बढि जानुहुन्न। मँ तपाइँलाई असन्तुष्ट गर्न चाहन्छु किनकि तपाइँ एक कानूनी तरीका मा एक बिल्कुल पेशेवर सफ्टवेयर र बिल्कुल नि: शुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रीमियर प्रो एनालॉगहरु छन् कि अतिरिक्त भुक्तानी बिना नै स्तर मा कार्यहरु प्रदर्शन गर्दछ।
उपयोग डेभिनस रिजल्भ फ्री
यसको भिडियो र अडियो तुल्यकालन क्षमता
सरल र प्रभावशाली इन्टरफेस
शानदार रंग ग्रेडिंग सुविधा
प्रयोगकर्ता रचनात्मक बहु क्याम विकल्प लागू गर्न सक्नुहुन्छ
यो उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटर को माग गर्दछ
प्रभाव प्लेटफर्म पछि कुनै गतिशील लि provide्क प्रदान गर्दैन
DaVinci हल लाइट १ Ad एडोब प्रीमियर मुक्त एनालग छ। यो सशुल्क भिडियो सम्पादक DaVinci संकल्प को एक सरलीकृत संस्करण हो। अनुप्रयोग भिडियो क्लिप को पेशेवर रंग सुधार मा केन्द्रित छ, तर तपाइँ यसको मद्दत संग भिडियो को कुनै पनि प्रकार को सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेशेवर सम्पादक हो र तपाइँ तुरुन्तै यो दुबै इन्टरफेस को गुणस्तर र यसको कार्यक्षमता मा ध्यान दिनुहुनेछ।
DaVinci रिजल्व लाइट धेरै भिडियो फिल्टरहरु लाई समावेश गर्दैन, यो मुख्य रूप मा एक रंग सुधारक हो, तर OpenFX समर्थन यो समस्या को हल गर्दछ। तपाइँ डाउनलोड र अतिरिक्त भिडियो फिल्टर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। NewBlueFX वा रातो विशाल फिल्टर यस कार्यक्रम को लागी उपयुक्त हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार कार्यक्षमता को विस्तार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस् सबै भन्दा राम्रो भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर।
NUKE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
आधारभूत compositing प्रकार्यहरु को पूरा सेट
उच्च ग्रेड 3D प्रणाली
राम्रो शिक्षण उपकरण
कुनै म्याक ओएस एक्स १०.५ समर्थन छैन
सीमित प्लग-इन विकल्प
गरीब गति ग्राफिक्स उपकरण
यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि कसरी एडोब प्रीमियर प्रो को लागी नि: शुल्क प्राप्त गर्न को लागी, मँ तपाइँलाई यो नि: शुल्क विकल्प को उपयोग मा विचार गर्न को लागी सल्लाह दिन्छु। Nuke उच्चतम वर्ग को एक पेशेवर भिडियो सम्पादक हो, जो अवतार, किंग कंग, I, रोबोट, Tron, र Hobbit को रूप मा यस्तो फिल्महरु बनाउन को लागी प्रयोग गरीएको थियो। सफ्टवेयर मुक्त गर्न को लागी व्यक्तिगत र शैक्षिक प्रयोजनहरु को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कार्यक्रम इन्टरफेस साधारण भिडियो सम्पादकहरु जस्तो लाग्दैन। भिडियो टाइमलाइन मा स्थित छैन, तर यहाँ ग्राफ मा छन्।
ग्राफ को शिखर जोडिएको छ, यसैले अन्तिम फिल्म बनाउन। यो ध्यान दिन लायक छ कि कार्यक्रम एक शक्तिशाली कम्प्यूटर को आवश्यकता छ। Nuke पोस्ट प्रसंस्करण, संक्रमण, 3D र परिवर्तन प्रभाव को लागी फिल्टर को एक ठूलो संख्या मा शामिल छ। प्रभाव मापदण्डहरु को प्रत्येक धेरै keyframes मा थप्न सकिन्छ। Nuke एक शक्तिशाली भिडियो सम्पादक हो, जो नौसिखिया प्रयोगकर्ताहरु को लागी धेरै जटिल लाग्न सक्छ, तर यो निश्चित रूप बाट अनुभवी भिडियो सम्पादकहरु को लागी उपयुक्त छ।
शटकट मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
मोड्युलर प्रयोगकर्ता इन्टरफेस तपाइँको कार्यप्रवाह सजिलो व्यवस्थापन गर्दछ
निर्यात र आयात ढाँचा को एक विस्तृत श्रृंखला समर्थित
आधिकारिक ट्यूटोरियल र दस्तावेजीकरण एक सानो anemic छन्
चमकदार संक्रमण र प्रभाव अन्य सफ्टवेयर प्रस्तावहरु को एक धेरै अभाव छ
Shotcut एक खुला स्रोत मुक्त भिडियो सम्पादक हो। यो धेरै रेकर्ड गरिएको भिडियो को उपयोग गरेर एक फिल्म बनाउन मद्दत गर्दछ। यसको अतिरिक्त, आवेदन भिडियो र अडियो फिल्टर को एक ठूलो संख्या को समर्थन गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ सेतो ब्यालेन्स सच्याउन सक्नुहुन्छ, रंग सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, वा HTML मार्कअप द्वारा परिभाषित पाठ ओभरले गर्न सक्नुहुन्छ। Shotcut FFMpeg को उपयोग को लागी धेरै ढाँचाहरु लाई समर्थन गर्दछ।
यो काफी विविध कार्यक्षमता संग एक धेरै राम्रो मुक्त भिडियो सम्पादक हो। तपाइँ यसको मद्दत संग एक सानो फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को फाइदा यो हो कि डेवलपर्स लगातार कार्यक्रम मा सुधार र दोषहरु लाई सुधार गर्दै छन्। निस्सन्देह, यो सबै भन्दा राम्रो एडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2018 विकल्प मध्ये एक हो।
को बारे मा अधिक जाँच गर्नुहोस् सोनी भेगास बनाम एडोब प्रीमियर।
ओपनशट नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
प्रयोगकर्ता frinedly इन्टरफेस
लिनक्स, विन्डोज, र म्याक को लागी उपलब्ध छ
असीमित ट्र्याक / तहहरु
3D एनिमेसन उत्पादन सुविधा एक निर्मित सुविधा हैन
Ubuntu 9.10 को साथ समस्याहरु
OpenShot अर्को खुला स्रोत मुक्त भिडियो सम्पादक हो। यो लिनक्स को लागी विकसित गरीएको थियो, तर त्यहाँ विन्डोज र म्याक ओएस एक्स को लागी आज उपलब्ध विकल्पहरु छन्। भिडियो सम्पादक एक साधारण इन्टरफेस छ, एक पूर्वावलोकन विन्डो, एक समयरेखा र आयातित फाइलहरु को एक सूची सहित। OpenShot भिडियो ढाँचा को एक ठूलो संख्या समर्थन गर्दछ (यो FFmpeg प्रयोग गर्दछ)। यसबाहेक, भिडियो सम्पादक प्रभाव र क्षणिक, साथै 3D पाठ र एनिमेसन को लागी उपयोगिताहरु सामेल छन्।
को बारे मा अधिक हेर्नुहोस् कसरी एडोब मुक्त गर्न को लागी प्रभाव पछि र यो असामान्य दृश्य ग्राफिक्स बनाउन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
SPLICE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
यो प्रयोग गर्न धेरै सरल छ
अनुप्रयोग एक व्यापक अडियो पुस्तकालय छ
त्यहाँ छनौट गर्न को लागी केहि फरक संक्रमणहरु छन्
तपाइँ सीधै यूट्यूब, फेसबुक, र इन्स्टाग्राम मा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ
यो एन्ड्रोइड को लागी उपलब्ध छैन
केहि संगीत प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत छ
Splice आईओएस को लागी एक राम्रो मुक्त भिडियो सम्पादक हो। यो तपाइँ तपाइँको ग्यालरी बाट फाईलहरु लाई धेरै छिटो एक फिल्म बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोग संगीत फाइलहरु को एक राम्रो संग्रह छ कि तपाइँको भिडियो मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पनि iTunes बाट संगीत डाउनलोड गर्न सम्भव छ।
Splice भिडियो फसल, भिडियो फिल्टर, दृश्य संक्रमण, क्याप्शन जोड्ने र अडियो टिप्पणी रेकर्डि such को रूप मा यस्तो कार्यहरु लाई समर्थन गर्दछ। ब्याह एक धेरै सरल इन्टरफेस छ। यसबाहेक, तपाइँ सामाजिक नेटवर्क मा अन्तिम भिडियो साझा वा ग्यालरी मा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क भिडियो सम्पादन LUTs
यदि तपाइँ एक शुरुवात वीडियोग्राफर हुनुहुन्छ, जब यो भिडियो सम्पादन को लागी आउँछ, र gra ग्रेडिंग सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण तत्वहरु मध्ये एक हुन सक्छ। LUTs LUTs को निम्न प्याकहरु डाउनलोड र रंग ग्रेड को बचत को लागी डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन प्रयोग वा तपाइँको परियोजनाहरु लाई लागू गर्न सकिन्छ।
एडोब प्रीमियर प्रो नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
PREMIERE PRO सित्तैमा
PREMIERE ELEMENTS सित्तैमा
एडोब प्रीमियर प्रो वा प्रीमियर तत्वहरु परीक्षण संस्करण बिल्कुल मुक्त यो पेशेवर भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको मात्र तरीका हो। मँ बुझ्दछु कि तपाइँ7दिन को लागी प्रीमियर को उपयोग गर्ने अवसर भन्दा धेरै केहि प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तर यो सबै हो कि एडोब तपाइँलाई तिर्न र कानून को उल्ल viola्घन बिना प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
Adobe Premiere Pro लाभ
नि: शुल्क LUTs
Adobe Audition नि: शुल्क
नि: शुल्क Lightroom कसरी प्राप्त गर्ने
Photoshop Express अनलाइन
Acrobat Pro DC नि: शुल्क
Adobe Spark नि: शुल्क
कसरी फोटोशप CS6 नि: शुल्क प्राप्त गर्ने
को नि: शुल्क Adobe सफ्टवेयर 2021